IRaintree Bure ibekwe ngokulula ngaphaya kweAudry's Beach eyaziwayo. Iivenkile kunye neendawo zokutyela ngaphakathi kwemizuzu eyi-10 okanye ukuhamba ngaphantsi. Iveranda enkulu egqunyiweyo yokuphumla kwaye iyadi ebanzi ilungile kubantwana. Zive ukhululekile ukuzulazula egadini ukuze ufumane iziqhamo nemifuno. Jonga i-Matei ngebhayisekile okanye nge-kayak, zombini simahla ukuba uzonwabele ngexesha lokuhlala kwakho kodwa kufuneka zisetyenziswe ngomngcipheko wakho. Siyavuya ukubonelela ngezothutho zohambo lokuya nokubuya simahla ukuya nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya.
Iindwendwe ziya konwabela amagumbi amabini okulala apheleleyo kunye negumbi elitsha eligqunyiweyo elinombono wolwandle. Ngaphakathi kukho ikhitshi eligcweleyo kunye neshawari entle yomlambo entsha enamanzi ashushu. Uya kuba nokufikelela kwi-wifi kuyo yonke indlu kunye nomgangatho. Umbane welanga ziiyure ezingama-24 ngosuku kodwa nceda kungabikho zixhobo zokomisa iinwele okanye izixhobo ezivelisa ubushushu kuba sixhomekeke kumandla ebhetri kwaye ezi ziya kuwakhupha ngokukhawuleza. Sikuphela kwendawo yokuhlala yile xabiso elinikezela ngendlu yokulala ezimbini kunye nekhitshi epheleleyo, amandla kunye ne-wifi 24/7, iishawa ezishushu, abalandeli kumagumbi omabini, iimbono zolwandle, izitiya eziphilayo, kunye nokusetyenziswa kwamahhala kwe-kayaks (ukuba ikhona) kunye neebhayisekile.
4.72 · Izimvo eziyi-44
Abanakekeli bethu abamangalisayo uVinna noRobert baya kukwazi ukunceda nantoni na onokuyidinga ngexesha lokuhlala kwakho ukususela ekubeni mna noShauna okwangoku asikho eFiji. Baya kuba bahlambulule zonke iintsuku ezimbalwa kwaye batshintshe iilinen kunye neetawuli. Bakwavuya kakhulu ukukunceda ulungiselele nayiphi na imisebenzi onokuthi ube nomdla wokuyenza enje nge-scuba diving, ukubukela iintaka, ukukhwela intaba, ukuntywila emanzini, ukusefa okanye ukubona indawo. I-Vinna ikwabonelela ngokuphulula okuhle kanye kumgangatho kunye nokutya okumnandi okuphekwe ekhaya kusiwa ngexabiso elikhulu.
Abanakekeli bethu abamangalisayo uVinna noRobert baya kukwazi ukunceda nantoni na onokuyidinga ngexesha lokuhlala kwakho ukususela ekubeni mna noShauna okwangoku asikho eFiji. Baya…